I-china Wholesale Reduced Power LED driver eziphuthumayo - Umhlinzeki womkhiqizi - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
Ikhaya > Umshayeli Ophuthumayo We-Power LED
DF518S Izici ezikhethekile zokugqamisa Le kit ingakulingana nokukhanya okungu-40w okuphezulu futhi inokukhishwa kwamandla ka-1w-5w okuphuthumayo! Alikho ibhethri le-extral - Yakha-ngaphakathi-ibhethri ngaphakathi kwecala, ukusekelwa kokukhanyisa okuphuthumayo okungaphezu kwama-3hours! Usayizi omncan......
Lezi zipakethe zamandla eziphuthumayo ze-LED Max 50wâ € ”i-DF268C ingaba amandla kagesi aphuthumayo ikakhulukazi emikhiqizo yokukhanyisa ye-LED.
Amaphakethe wamandla ophuthumayo we-LED Max 60wâ € ”DF518T
Izici ze-DF518T Specialty Highlightï¼š â - ‡ Buyekeza inguqulo ye-DF168T! Le kit ingakulingana nokukhanya okungu-60w okuphezulu futhi inokukhishwa kwamandla kagesi okuphuthumayo okungu-1w-5w! Usayizi omncane, ukufakwa okulula, ungafaka ngaphakathi kwezibani. - Ukuzihlola okuzenzakalelayo, ukuhlolwa ......
Lawa Maphakethe Wamandla Aphuthumayo we-LED Max 100wâ € ”i-DF168-30H isebenzisa isekhethi yamandla kagesi asimeme ahlala njalo.
Amaphakethe wamandla eziphuthumayo we-LED Max 200wâ € ”DF168-30D
Izici ze-DF168-30D Specialty Highlightï¼š â - ‡ Buyekeza inguqulo ye-DF168-30D! ● Landela uhla olubanzi lokukhanya kwangaphandle komshayeli oholelekile. ● Lungela ukukhanya okungama-200w okuphezulu futhi inokukhishwa okuphezulu kwamandla kagesi okuphuthumayo angama-65w. - Ukuzihlola okuzenzakalelayo......
DF-338 Izici Ezivelele Zokugqamisa Incazelo Yomkhiqizo Imodyuli yokukhanyisa eziphuthumayo ye-DF338 yenzelwe ukuguqula isibani se-fluorescent, njenge-T5, T8 tube. Ngokuvikela ukushaja, ukuvikela ukukhipha, ukuvikela umthwalo nokuvikelwa kwesifunda okufushane.